Ethiopia Xagay Ku Socotaa.?!
Sunday November 21, 2021 - 20:51:20 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Markii Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed uu ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda aduunka ee Nobelka Sanadkii 2019 waxaa lagu ammaanay inuu yahay nabad sameeyaha gobolka. Balse hadda waxa uu madax ka yahay dagaal sokeeye oo daba dheeraaday, kaas oo ay dad badani qabaan in uu eeg yahay xasuuqa, Waxana Abiy Axmed uu khalkhal geliyey guud ahaan Nabada gobolka Geeska Afrika taas oo uu shalay Nabad Doon u aha maantana dagaal doon u muuqdo.
Bishii Nofembar 2020, ayuu Abiy amar ku bixiyay duullaan Milateri lagu qaado Gobolka Waqooyiga Ethiopia ee Tigray waxana uu ballan qaaday marka in Dagaalka Gobolka Lagu qaaday si deg deg ah loo Soo Af Jari doon. Hal sano ka dib dagaalkii wuu faafay in la soo af jaro daaye waxa la dul jooga maanta kaabigi Casimadi, Waxana uu Dagaalku galaaftay kumanaan qof naftoodi, Waxana ku barakacay wax ka badan 2 milyan oo qof kuwaas oo guryahoodii ka cararay, waxana u Dagaalkani keenay macaluul baahsan waxana uu kor u qaaday Kala qaybsanaanta Qomiyahadaha oo Hubka isu wada qaatay.
Ethiopia waxa ay la dalaa dhacaysay mudo dheer caqabado dhaqaale mid qoomiyadeed iyo kuwo siyaasadeedba kuwaas oo taagna xattaa ka hor khilaafkan u dhexeeya Abiy Ahmed iyo gobolka Tigrayga Balse ay Tigyagu khilaafkaasi dabkisii baxaayey gaas dusha kaga sii shubeen.
Laakin hadda iyada oo ay sii kordhayaan colaaddaha ka jira degaannada kale ee Ethiopia waxaa hadana isa soo taraya cabsida laga qabo in dagaalka Tigray-gu uu dhalin karo dhibaato balaadhan oo suurtagal ka dhigta in ay kala qaybsamaan dhamaan Qowmiyadaha wada degan waddanka labaad ee ugu dadka badan Qaarad Afrika halkii Laga sugaayey in Qowmiyadahan Kala duwani isu so dhawadaan si ay u wada noolaadan.
Maxa Keenay Dagaalka Ethiopia.?!
Ugu horayntii Colaadda Tigray-ga ayaa iyadu salka ku haysa xiisado Dagaal oo Soo jiray Jiilal badan oo hore Tariikhda Dalka Ethiopia.
Dalka Ethiopia waxa u ka koobani yahay 10 Maamul Goboleed iyo laba Magaalo oo leh Meeqaamyo gaara, waxaana jira in Maamul kastaaba leeyahay Nidaam u gaara sida Booliiska iyo maamul u gooniya Dadkiisa waxana ay toos u hoos tagaan Dawlada Federalka, Ciidanka Federaalkuna waxa u jooga dhamaan Deganada Mamulada xattaa hada waxay ku suganyihiin Dhulka Mamulka Tigray gaar ahaan dhanka ay Xadka Sudan kala wadagaan Tigraygu, Hadaba Dawlad goboleedyadaasi inta badan waxay u qaybsan yihiin qaab qowmiyadeed kuwaas kala xadaysan ayna Colaado wada dhex yalaan.
Ka hor inta uusan Abiy Ahmed xukunka qaban (TPLF) waxay gacan bir ah ku hayeen Xukunka Ethiopia muddo dheer waxayna dusha kala socdeen xasilloonida iyo kobaca dhaqaale ee Dalka, Siyaasadduna waxay ahayd mid u Af duuban iyaga. Xukunka Xisbigii Tigraygu hogaanka u hayey waxa ku bilowday Kacdoono Dadweyne kuwaas oo ugu dambeyntii ku khasbay in ninkii ka horreeyay Abiy Ahmed ee Hailemariam Desalegn uu hadh galay is casilo.
2018, Abiy Ahmed waxa loo magacaabay in uu qayb ka noqdo dabaqadda sare ee talada Dalka haysa si ay u qaboojiyaan xiisadaha Kululanaaya marka ayna isbeddel u keenaan, Hadaba Abiy Ahmed isaga oo aan kor u eegin nidaamkii Siyaasadeed ee ka horeyey waxa uu ahaaba, Aya isla markiiba waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha Ethopia, Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay marka dib u habeyn in uu ku sameynaayo isbaheysigi talada hayey ee (TPLF) oo aha aasaasaha Jabhaddi Kacdoonka Shacabka Ethiopia ama (EPRDF) kuwaas oo ka kooban Afar Xisbi, Waxana uu sameyey Xisbi kale oo uu ugu Magac daray Barwaaqo kaas oo meesha ka saaray saamayntii (TPLF) iyo xulafadodiiba.
Isaga oo ku guda jira Ololaha Xisbigiisa Siyaasadeed aya waxa mar uun Abiy Ahmed ku dhashay cabsi uu ka qabo in Gobollada qaarkood Nidaamka Federaalka Dalka ka hoos baxaan, Oo madax bannaanidooda ku dhawaqaan sida Gobolka Tigray-ga oo ku dhiiraday taas Hogaamiyayaashiisuna u baxeen dhanka Buuraha Waqooyi iyaga oo hubaysan, Balse hadana ay iyagu weli sii wadeen Maamulka Gobolkooda ila ay markii danbe Xiisadu kacday oo ay gaadhay meel xun.
Bishii September 2020, ayey Tigraygu ka soo horjeesteen Abiy Ahmed iyaga oo ku eedeyey dib u dhigista Doorashadii Baarlamaanka Waqtii u faafayeey Cudurka Coronavirus taasna ay keentay dib u dhiga doorashada Ethiopia sida ay sheegtay Dawladu, Abiy Ahmed ayaana ku tilmaamay codbixintay sameyeen mid sharci darro ah waxaana uu ka jaray dhaqaalihii u siin jiray hoggaanka (TPLF) isaga oo xattaa lacagtii Dalka bedelay marka, taas oo Aduunka u muujisay dagaalka u dhexeeyo Tigrayga iyo Dawladda Dhexe Ethiopia.
Bishii Novembar 4, 2020, ayuu Abiy Ahmed ku eedeeyey kooxda (TPLF) inay weerareen saldhig ay Ciidamada Federaalka ku lahayeen meel ka yara baxsan Magalada Mekelle ayna isku dayeen in ay hubka ka dhacaan Ciidanka, Abiy Ahmed wuxuu marka amar ku bixiyey in weeraro lagu qaado kooxdan isaga oo u diray Cutubyo ka mida ciidamada qaranka Ethiopia iyo dagaalyahano ka socday Gobolka ay dariska yihiin ee Amxaarada dhanka kale ay wehelinayeen Askar ka socota Dalka Eritrea.
Abiy ayaa ku dhawaaqay in uu Guulo ka gaadhay Weerarka ka dib Saddex Toddobaad oo kaliya markii ay Ciidamada Dowladdu la wareegeen Gacan ku haynta Magalada Mekelle, waxana u soo dhisay marka Maamul ku meel gaadh ah kaas daacad u ah Addis Ababa, Laakiin Mudo ka dib Maamulkaasi wuu kala yaacay mana uu shaqayn.
Gabood Falada Dhacay Waqtiga Ila Maanta.!
Bilowgii colaaddaba Abiy Ahmed waxa uu beeniyey in Dad rayid ah ay waxyeelo gaadhsiyeen Ciidankiisu iyo in Askar ka tirsan Ciidanka Eritrea ka qayb qateen dagaalka.
Laakin warbixinada ka soo baxay goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kooxaha xuquuqul insaanka u dooda ayaa labaduba diiday waxa uu Abiy Ahmed sheegay.
Qaramada Midoobay ayaa dhankooda ku tilmaantay Weerarka in uu ka dhashay Qaxii ugu xumaa ee ka dhaca Ethiopia labaatankii sano ee la Soo dhaafay, Waxay ku qexeen colaada mid masiibo bani aadam ah.
Dowladda Ethiopia wixii marka ka danbeyey si aad ah ayey u xaddidday Xoga laga helaayo Dalkeeda iyada oo isgaadhsiintii Hawada ka saartay Waqtii ay dhacdooyinkii gobolku socdeen taas oo ka dhigtay mid adag in la qiyaaso inta ay dhibaatadu gaadhsiisan tahay.
Laakiin cadaymaha gabood fallada dhacay ayaa bilaabay inay soo shaac baxaan horaantii sanadkan,
Baadhitaano ay samaysay Hay'aad Amnesty International bishii Febraayo aya lagu soo ban dhigay caddaymo muujinaya xasuuqii ay ciidammada Ereteriya ka gaysteen Magaalooyinka Dengelat iyo Axum ee Gobolka Tigreega dabayaaqadii sannadkii hore.
Baadhitaan kale oo la sameyey bishii June ayaa Daaha ka qaaday faahfaahino cusub oo ku saabsan xasuuq ay Askarta Ethopia ka geysteen Magaalada Mahibere Dego bishii Janaayo ee Gobolka Tigrayga. Warbixintaana waxa tilmaamay mid ka mid ah dadkii ka dambeeyay dhibta.
Dhammaan Jilayaasha Dagaalka ayaa lagu eedeeyey in ay geysteen gabood fallo, balse Ciidamada Eritrea ayaa lala xidhiidhiyey qaar ka mid ah kuwii ugu foosha xumaa. Marka laga soo tago in ay gaysteen Dil wadareedyo Askarta Eritrea ayaa sidoo kale lagu helay iyaga oo xannibaaya oo dhac u geysanaya Cuntooyin Gargaar ah qaybo badan oo ka mida Gobolka Tigrayga.
Dowladda Eritrea ayaa beenisay inay wax lug ah ku leedahay xadgudubyo, Dhan kalena Dowladda Ethiopia ayaa ballan qaaday in ay badhitaan ku sameyn doonto fal kasta oo dhacay Dagaalka.
Abiy Ahmed Nabad Doonkii Geeska Africa.!
Wax ka yar hal Sano ka hor inta aanu Abiy Ahmed Weerarka ku qaadin Gobolka Tigrayga waxa uu ku tilmaamay Dagaalku in uu yahay "Tusmaddii Cadaabta Aduunka” hadalkan waxa uu ka yidhi intii uu waday khudbadii uu ku gudoomayey Abaalmarinta Nabadda Aduunka ee Nobel Peace Prize. Waxaa loogu Abaal mariyey Abaal marintan doorkii fiicna ee uu ka qaatay soo afjarida colaadii mudada dheer soo jiitamaysay ee kala dhaxaysay Dalkiisa dalka ay Jaarka yihiin ee Eritrea iyo in uu isbadal muuqda ka sameeyay Dalkiisa Ethiopia.
Eritrea waxay mar ka mid ahayd Dalka Ethiopia laakiin waxay xornimada ka qaadatay 1993 ka dib halgan hubaysan oo socday 30 sano. Intii u dhaxaysay 1998-kii ilaa 2000-kii, Ethiopia iyo Eritrea waxaa dhexmaray dagaalo ay ku dhinteen kumannaan qof oo labada dhinacba leh, Kaas oo horseeday is mari waa dheer oo khatar geliyey gebi ahaanba iskaashigoodii Jaarnimo.
Markii uu xukunka qabtay Abiy Ahmed waxa uu si deg deg ah waxa u ugu dhawaaqay in uu caadi ka dhigaayo xidhiidhka Eritrea Iyo Ethiopia Isaga oo aqbalay go’aankii guddida Caalamiga ahi ka sameyeen xuduudaha Labada Dowladood.
Abiy Ahmed ayaa sidoo kale ku dhaqaaqay dhanka dib u habeynta Gudaha taas oo sare u qaaday rajada laga qabo inuu la yimaado isbedel Waara, Sidoo kale waxa uu sii daayay kumannaan maxaabiis ah oo u xidhxidhnaa Arrimo Siyaasadeed waxana uu ku dhaqaaqay in uu furo warshadaha isgaadhsiinta iyo in uu balaadhiyo maalgashiga gaarka ah.
Balse sumcadii uu ku yeeshay Hogaamiye midayn kara Ethiopia ayaa si deg deg ah u sii xumaanaysay, Waxaana heshiiskii nabadeed ee uu la galay Eritrea ee aadka loogu bogay u muuqday marka mid u gogol xaadhaya in ay labada dalba dagaal la galaan (TPLF).
Tan iyo markii ay bilowdeen colaada rabshadaha isirka salka ku haya ayaa waxa dalka ka dhacayey kacdoon Qowmyadeed oo hubaysan sida gobolka uu ka soo jeedo Abiy Ahmed ee Oromiya oo ah gobolka ugu dadka badan, Bishii May ciidanka Xoraynta Oromada ee (OLA) oo ah iyana koox hubaysan ayaa wacad ku maray in ay dagaal guud ku qaadi doonaan xukuumadda Abiy Ahmed.
In kasta oo ay jiraan ballan qaadyo lagu daweynayo kala qaybsanaanta qowmiyadaha loona gogol xaadhayey isbeddel nabadeed oo ku yimaada si dimoquraadi ah Iyo Xisbiyada badan, Hadana Abiy waxa uu si isa soo taraysa u adeegsanaayey awooda dad cabudhinta sida Xidhida internetka adeegyada taleefoonada xadhiga saxafiyiinta iyo cabudhinta mucaaradka. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale lagu dhaleeceeyay in uu isagu sii hurinaayo colaada Tigrayga isaga oo isticmaala hadalo xanaf Leh marka u ka hadlaayo colaadda Tigrayga isaga oo ciidamadooda ku tilmaamay in ay yihiin kansal.
Bishan Luulyo, oo uu dagaalku socday Abiy Ahmed iyo xisbigiisa Barwaaqo waxa ay guul weyn ka gaadheen Doorashadii guud xili ay qaadaceen Xisbiyada mucaaridku.
Taasna waxay niyad jab ku keentay dad badan oo rajo weyn ka qabay in isbedelkii dimuquraadiga ahaa ee uu Abiy Ahmed ballan qaaday saddex sano ka hor in uu hirgelin doono doorashadan.
Ethiopia & Maanta.
Dawladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xabbad-joojin hal dhinac ah bishii Juun, markii ay ciidammada Tigraygu dib ula wareegeen caasimadda gobolkooda ee Mekelle, Balse kooxda (TPLF) ayaa gabi ahaanba meesha ka saartay in ay wax heshiis ah la galasho Abiy Ahmed, Waxana u dagaalku ku fiday meelo ka baxsan xudduudaha Tigray-ga sida gobolada ay dariska yihiin ee Axmaarada iyo Canfarta.
2-dii Novembar, ka dib hal sano oo dagaal lagu jiray Gobolka Tigray ayey Dawlada Ethiopia ku dhawaaqay xaalad deg deg ah dadkana waxay ugu baaqday in ay hubka qaataan si ay u difaacaan caasimadda.
Maalin ka dibna ilo diblomaasiyadeed oo sare sare kuna sugan Ethiopia aya xaqiijiyey in dagaalyahanno ka tirsan Ciidamada Difaaca Tigray (TDF) iyo Ciidanka Xoreynta Oromada (OLA) ay ku sugan yihiin duleedka caasimadda.
Waxayna intaa ku dareen in jabhadahani awood u leedahay hada inay galaan gudaha magaalada kuna dhex sugnan karaan saacado haddii ay door bidaan balse ay door bidayaan inay sugaan inta heshiis la gaadhayo oo ay debeda ka joogan caasimada.
Horumarkan deg dega ah ee ay dagaalyahanada Tigrayga samaynayaan ayaa la sheegayaa in ay ku qabsadeen Magalada Dessie iyo Kombolcha oo ah labo magaalo oo muhiim ah kuna yaala wadada Addis Ababa tagta, Taas ayaana hada keentay in madaxda Dawlada Ethiopia ay walaac ka muujiyaan in xatta caasimadu gacantooda ka baxdo.
Afhayeen u hadlay dowladda ayaa ku murmay qabsashada magaalooyinkan, balse markii dambe ayuu mar kale bayaan uu soo saaray wuxuu ku eedeeyay ciidamada Tigrayga in ay 100 dhalinyaro ah ku toogteen magalafa Kombolcha, Kooxda (TPLF) ayaana beenisay warkaas dhankooda.
Iyadoo ciidamada Tigreegu ay jiida hore ee koonfurta ka soo durkayaan, ayey hadana dawladdu xoojisay duqaymaha ay ku hayso magaalada Mekelle iyo magaalooyinka kale ee Tigreega,
Iyaga oo isku dayaaya in ay bartilmaameedsadan halka ay ka soo dulayaan Tigraygu.
Abiy Ahmed ayaa ku booriyay muwaadiniinta inay hubka qaataan oo ay la dagaalamaan ciidamada Tigrayga waa Sida uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa Faceboogiisa Axaddii in kasta oo qoraalkiisii Laga saaray halka marki danbe.
Maamulka magaalada Addis Ababa ayaa iyaguna dadka ku amrayay in ay isdiiwaan geliyaan iyaga iyo hubkooduba yimaadaana xafiisyada degmoyinka caasimada.
Xoghayaha Arimaha Dibada Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Washington ay aad uga argagaxday wararka sheegaya in kooxda (TPLF) ay la wareegtay magaalooyin badan "Dhammaan dhinacyadu waa inay joojiyaan hawlgallada milatari oo ay bilaabaan wada xaajoodyo xabbad joojin ah iyadoon wax shuruud ah lagu xidhin,” ayuu ku yidhi bartiisa Twitter-ka.
Aragtida Maraykan Ee Xaalka Ethiopia.!
Iyadoo dagaalka iyo saameynta uu ku leeyahay dadka rayidka ah uu sii xoogeysanayo ayaa madaxda caalamka waxa ay ka dhawaajiyeen dareenkooda ku aadan xayiraada ay dowladda Ethiopia ku sameysay gargaarki la siinayey Tigrayga iyo doorka ay ciidamada Eritrea ku leeyihiin Dagaalka.
Saraakiisha sare ee maamulka Biden ayaa ka digay in Ethiopia ay lumin doonto barnaamijka ganacsiga faa'iidada badan leh ee Mareykanku siiyo sababo la xidhiidha xadgudubyada xuquuqda aadanaha haddii aysan qaadin tillaabooyin wax ku ool ah oo ku aaddan joojinta colaadda socota iyo yareynta dhibaatooyinka bini'aadantinimo bilowga sanadka so socda 2022.
Madaxweyne Joe Biden ayaa go'aamiyay in Ethopia ay ka baxday u hoggaansanaanta shuruudaha u qalmitaanka Xeerka Kobaca iyo Fursadaha Afrika ee loo yaqaan (AGOA) "xadgudubyada waa weyn ee xuquuqda aadanaha ee caalamku aqoonsan yahay waa Lama taabtan" ayuu ku sheegay warqad uu u diray aqalka Congress-ka November 1-dii.
Dawladda Ethiopia waa in ay qaaddaa tallaabooyin deg deg ah ugu dambayn 1-da Janaayo si ay ugu sii jirto barnaamijka kaas oo siiya waddamada Saxaraha ka hooseeya ee u qalma marka in ay si cashuur la'aan ah u galaan suuqyada Maraykanka dhamaan badeecooyinkoodu.
Maamulka Mareykanka ayaa sidoo kale isku diyaarinaya in uu soo saaro cunaqabateyn ka dhan ah dhinacyada isku haya, iyadoo la raacayo amarka fulinta ah ee uu saxiixay Biden bishii Septembar sida ay saraakiishiisu sheegeen.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa horay ugu dhawaaqday xayiraado dhanka fiisaha ah oo lagu soo rogay mas’uuliyiinta dowladda Ethiopia iyo Eritrea iyadoo maamulka Biden uu ku soo rogay xayiraad baladhan oo dhanka dhaqaalaha ah.
Waxana ay qaar ka mida shaqalaha sarafada maraykanka ee Ethiopia bilabeen in ay dalka iskaga baxaan.
Ugu danbayntii Waddamada midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ku celceliyay baaqyada ku aaddan xabbad joojin deg deg ah iyo in xaajada wada hadalal lagu soo af meero.
Waxana hada Ethiopia booqasho ku jooga ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman kaas oo ku dedaalaya in bal wada hadal lagu dhameeyo colaadda Ethiopia.
Waxaynu Ethiopia u rajaynaa wanaag iyo in ay dhibta ka baxdo arinkooda sida ugu wanagsan u dhamaystaan.
Waxa Qoray: Eng Samaale Mo Somali